Slackware ထည့်သွင်းမှုမှတ်တမ်း Linux မှ
Slackware တပ်ဆင်ခြင်းမှတ်တမ်း - အရာရာတိုင်းကကြည့်လို့မရ
eliotime ၃၀၀၀ | | ဖြန့်ဝေ
အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ သငျသညျsurelyကန်အမှန်အငါ့ကိုမှတ်ချက်ပေးမြင်ကြပြီ debian ငါ distro နှင့်ငါ့ဒဏ္distာရီတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူအခြားသူများအကြောင်းကိုကြိုက်တယ် CentOS / RHEL y Slackware ကိုတီထွင်.
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောမာရိသုံးပါးအနက်ကျွန်တော့်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးကတော့အမြဲတမ်းပါပဲ Slackware ကိုတီထွင်, အကြိမ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသူတို့ကဒီ distro မကစားကြဘူးသို့မဟုတ်သူတို့ကဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသည်, ငါယခုအချိန်အထိငါသိအရှိဆုံးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆောင်းပါးကမှုတ်သွင်းခံ ဒီ post ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံမှ ElavArch Linux အကြောင်းဘလော့ဂ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် RTFM ထက် KISS ထက်ပိုမိုသောဤ distro အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အားသူအားပေးခဲ့သည်။
Slackware တပ်ဆင်ခြင်းစတင်ခြင်း GNU / Linux စကြာ ၀ universeာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်သိကျွမ်းလာသောအခါ Slackware တပ်ဆင်ခြင်းသည်ခက်ခဲကြောင်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို install လုပ်ပြီးနောက်မှီခိုမှုများကိုဖြေရှင်းသည့်အခါများသောအားဖြင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ထိုဒဏ္myာရီများစွာကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးဖြစ်သည်၊ DMoZ ကဲ့သို့သောစာရေးဆရာများ၏အကူအညီကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းကြောင်းမှန်ဆီသို့ ဦး တည်စေခဲ့သည်။ ဒီ distro install လုပ်ပါ y ပြီးသွားထိထား၏ အဆိုပါကြိုးပမ်းမှုအတွက်အသေခံခြင်းမရှိဘဲ။
DMoZ သင်ခန်းစာကိုမမှတ်မိဘဲ၎င်းကိုတပ်ဆင်သည့်အချိန်နှင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန် ၆ နှစ်နီးပါးကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးနောက်၊ Slackware သည် Debian ကဲ့သို့လွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်ထားကြောင်း၊ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ရာတွင်၎င်းကိုသာကူညီခဲ့သည်။ တစ်ခုလုံးအနေနှင့် DVD ၏ ISO ISO တွင် Slackbook ပါ ၀ င်သည့်အပြင်၎င်း distro အကြောင်းပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပါ ၀ င်သည်မှာမည်သူမျှနီးပါး၎င်းကိုအရေးမကြီးသောပုံဖြစ်သည်။
၎င်းကိုအောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြီးပါက console သည်အသက်ဝင်လာပုံရသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားချက်ခြင်းစကားပြောခြင်း၊ ဟာသတစ်ခု၊ နာမည်ကြီးထားသောစကားစုနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာစကားစုကိုကျွန်ုပ်စတင်သောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ် log in လုပ်သောအခါချက်ချင်းပေးသည်။ တကယ်တော့ဒီအသေးစိတ်ကကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့ distros တွေတော်တော်များများမှာ user က console ကိုသုံးဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတယ်ဆိုတာမတွေ့ရဘူး၊ ဒါက KISS အတွေးအခေါ်ကိုလိုက်နာပေမဲ့လည်း configure အတွက်တောင်ကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့ပေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အသုံးပြုခံရဖို့ repos ။
ရှည်လျားသောသက်တမ်းကြာရှည်သောဤ distro သည်၎င်း၏ကျိုးနွံမှုနှင့်လွယ်ကူမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Cyber ​​Release Debian ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင်ကဲ့သို့ပင်ဖြန့်ချိဌာနခွဲနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ Arch, သင် Debian စမ်းသပ်ခြင်း၌ရှိသကဲ့သို့, အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပေမည်။
သုံးစွဲသူများစွာသည်လက်ရှိ GNOME (3.X) version ကိုမကြာသေးမီကညည်းညူနေခဲ့ကြသော်လည်း Slackware သည်ထိုအချက်ကိုမျှော်လင့်ထားသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် GNOME desktop ကို repos မှဖယ်ရှားခဲ့ပြီး KDE မှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Fluxbox, ငါ KDE ကိုသုံးရန်ရွေးချယ်သော်လည်းဤ distro သည် KDE သည် Debian နှင့်အခြား distros များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမွေးအတောင်ဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီ distro ကကျွန်တော့်ကို KDE ကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးထားလာစေတယ်။
သင်၏အာရုံကိုဖမ်းမိနိုင်သည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်အနုပညာလက်ရာများနှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ distros များစွာတွင်၎င်း၏မူလအနုပညာလက်ရာများပါ ၀ င်သည်ကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်သည်၊ သို့သော် Slackware တွင်၎င်းသည်မရှိခြင်း၊ ၎င်းကို၎င်း၏ Boot ကအသိအမှတ်မပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ LILO တွင် Slackware လိုဂိုဖြင့်စက်မှုလက်ရိုက်စာလုံးပါသောစာသားထက်မပိုပါ။
ငါက၎င်း၏အကောင်းအဆိုးကိုရှင်းပြပေမယ့်, ယခု cons များ၏အလှည့်လာ။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်ဟစ်စပန်းနစ်အနည်းငယ်သာသိသောသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤ distro နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းလိုလျှင်သင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့သွားသင့်သည်။ linuxquestions.org အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောရှုပ်ထွေးမှုသည်အဖြေတစ်ခုရှိမရှိကြည့်ပါ (slackbook အရ Slackware တွင်တရားဝင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည် trolls နှင့် fanboys များပြည့်နှက်နေသောကြောင့်၎င်းကိုပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် linuxquestions.org forum ကိုတရားဝင်ဖိုရမ်ဟုကြေငြာခဲ့သည်) ။
ထို distro ကိုဆန့်ကျင်သောအခြားအချက်တစ်ခုမှာ၎င်း distro ကိုစပိန်ဘာသာသို့ထည့်သွင်းခြင်းသည်အနည်းငယ်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင့်အားငါစွန့်ခွာခဲ့သည့် DMoZ post နှင့်လင့်ခ်များရှိနေသော်လည်း၎င်းမှာကဲ့သို့သောအထောက်အပံ့မရှိသေးသော်လည်းပြproblemနာမရှိပါ။ Debian သို့မဟုတ် CentOS လို distros များ။
Slackware သည် KISS distro ကိုအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်အောက်ပါရေးသားချက်များကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး slackpkg မှတဆင့်မှီခိုမှုများကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့် slapt-get (clone ဗားရှင်း) ကဲ့သို့သောပြsolvingနာအချို့ကိုဖြေရှင်းခြင်း၊ မှီခိုမှုများကိုဖြေရှင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုငြီးငွေ့စေရန် Debian ၏ apt-get ၏ repo တွင်ပါ ၀ င်မှုများကိုအလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးသောအချက်သည်အမှန်တကယ်တွင်ဤပြdistနာကကျွန်ုပ်အားအတွေးအခေါ်အတိုင်းလိုက်ရန်ကျွန်ုပ်အားယုံကြည်စေခဲ့သည်။ နမ်း (ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါ၊ မိုက်မဲ | ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါ၊ ကြိုးစားမှုအတွက်အသေခံခြင်းမရှိဘဲခရစ်ယာန်၌တည်၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Slackware တပ်ဆင်ခြင်းမှတ်တမ်း - အရာရာတိုင်းကကြည့်လို့မရ
Hmm .. ငါဒါက installation နဲ့အတူတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါမှမဟုတ်နောက်မှလာတာလား။ 😀
အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှာ DMoZ ဖြစ်သည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ အမှန်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါ eliotime3000 ဟာမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ပိုပြီးစိတ်ကြိုက်လမ်းညွှန်တစ်ခုလုပ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်
DMoZ လမ်းညွှန်တွင်မပါ ၀ င်သောအချက်များကိုတိုးချဲ့ခြင်းအပြင်ထပ်ဆောင်းဆောင်းပါးများတွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ slackpkg နှင့်ပင်မှီခိုမှုအသုံးအနှုန်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် slapt-get ကိုအသုံးပြုခြင်းခေါင်းစဉ်ကိုငါတိုးချဲ့မည်။
Federico Antonio Valdés Toujague ဟုသူကပြောသည်
o လိယကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ငါသည်လည်းအသေးစိတ်ဆောင်းပါးထင်ခဲ့တယ်။
Federico Antonio Valdés Toujague အားပြန်ပြောပါ
ငါကတစ် ဦး လမ်းပြခဲ့သည်ထင် ... ကလာပါတယ်
ငါတို့ရှိသမျှသည် installation လမ်းညွှန်အတွက်လာကြပြီထင်တယ် .. Hmm ..
ဟုတ်တယ်၊ လမ်းညွှန် ...
နောက်တာပါ၊ ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်မကြိုးစားတော့ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် Virtualbox OSE ကို screenshots များအတွက်ပြင်ဆင်နေသော်လည်းပိုမိုကောင်းမွန်သောအသေးစိတ်လမ်းညွှန်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
Slackware ကိုဒီလူကြိုက်များတဲ့ဘလော့ဂ်မှာစိတ်ဝင်စားတာကောင်းတယ်၊ Slackware ဆိုတာတကယ်တော့ထူးခြားတဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းပဲ။ KISS အပြင်၎င်းသည်သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးဖြစ်ပြီး UNIX နှင့်ဆင်တူသည်။
DMoZ သည်ပထမ ဦး ဆုံးအပိုဒ်များ၌ installation လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ရှုသောအခါ link သည် ... ရှိသည်။
ကျနော့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အမြင်ကတော့ Slackware ဟာ terminal ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ newbies တွေနဲ့အတော်လေးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါတယ်။ (သင်အလယ်အလတ်အင်္ဂလိပ်လိုသိလျှင်သေချာသည်) ၎င်းသည် kernel ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုလိုကိုင်တွယ်ရာတွင်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။
OFF: ငါစာမဖတ်ခင်ပထမဆုံးမျှော်လင့်ထားတာကမှတ်ချက်ပေးဖို့ပဲ။ xD
ငါအနည်းငယ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆော့ဗ်ဝဲစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အားသာချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဆာဗာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ထိရောက်စွာတပ်ဆင်ရန်စံပြဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဗားရှင်းအပြည့်တင်ထားသည့်ပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာသည့် package အားလုံးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါ။
အရာအားလုံးရှိနေပေမယ့်လည်း Arch ကိုမထားနိုင်တော့ပါ။
Chromebook သည် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Elav ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်နေသည့် Acer Chromebook C7 မှ…😀
Slackware ကို install လုပ်ရန်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်ဖြင့်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့ update လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ 😛
သင်သည်သင်၏ user agent နှင့် chrome: // plugins / paste လုပ်ပြီး netflix ကိုလှည့်စားပြီး၎င်းမှ Linux ကိုသုံးနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ရှုရန်။
The Great Lucifer ကိုပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ Acer C7 Chromebook ကိုစမ်းသပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါမှာမရှိတော့ဘူး .. စိတ်မကောင်းပါဘူး။
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်တော်ဟာ Slackware ကိုသုံးပြီး X ကိုမမြှောက်ဘဲ trident graph ကိုရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာထိရိုက်ခဲ့မိသည်။ ငါကပြန်လည်စဉ်းစားရန်ယခုအားဖြင့်အလုံအလောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်လိမ့်မယ်ဆိုပါစို့။
Terminal startx ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာသို့တက်သွားမည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။
ငါ pc ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ (လက်တော့ပ်ကအနိုင်ရတာကိုငါ့ကိုမယုံဘူး၊ မကြာသေးခင်ကမှပို့စ်ကကျွန်တော့်ကိုမယုံလို့)
Arch + Debian + Gentoo / Slackware တွေကိုဘယ်နေရာမှာအနိုင်ရမလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်အလံတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိတော့ Slackware ဖြစ်မယ်လို့ငါထင်တယ်
Debian ကငါကိုသုံးတိုင်းငါ့ကိုစွန့်ခွာစေတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်၊ ကျွန်တော်မသိဘူး၊ Arch, Slackware နဲ့ Gentoo တို့ဟာဆင်တူတဲ့အနှစ်သာရရှိတယ်။
ယခုငါ Salackware အပေါ်ဖြစ်၏
ကောင်းပြီငါဝန်ခံဖို့ကိုမုန်းပေမယ့်ငါကအကြံပြု: Arch ။
Elav၊ ငါ blog ပြောနေတာကိုငါသဘောကျတယ်၊ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အခမဲ့ software ကိုဆက်လက်။
Arch သည် KISS ထက်ပိုပြီးဖတ်နေသည့် The Fucking Manual ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဗားရှင်းရောဂါခံစားနေရသောသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
ထိုအခါငါတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ လာမည့် post ကိုပြင်ဆင်နေတယ်။
ငါ main ၏ distro ၏ Arch ကိုအသုံးပြုသည်။ pc နှင့် laptop ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ Raspberry တွင်လည်းကောင်း၊ PIII နှင့်ယခင်ကဲ့သို့တူညီသောအရာများတွင် debian ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အတန်ငယ်နှေးသော်လည်းအလွန်ရှုပ်ထွေး။ ၊ , ဒါပေမယ့်ငါက usb ပေါ်မှာထားရန်အလွန်ပျင်းရိခဲ့ပါတယ်
slackware များအတွက် Pacman pacman စွဲလမ်းသောကြောင့်, ... .. ပါလိမ့်မယ်
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Tux ကိုသူ့ပိုက်နဲ့ပြထားတဲ့ပုံမှာတင်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါအရမ်းများလွန်းတယ်၊ နောက်ပုံတစ်ပုံကိုသူတို့ထည့်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲငါမသိဘူး
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာ Tux ကိုသူ့ရဲ့ပိုက်နဲ့လာမယ့် Slackware post မှာထားလိမ့်မယ်။
ငါ Slackware ကိုအသုံးပြုသည်။ သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေသည်။ Arch ၌ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာကို Slackware တွင် tab ၂၀ ခန့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သီချင်းနားထောင်နေပြီးသီချင်းနားထောင်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းကိုသတိပြုမိပြီး CPU သည် ၁၀၀% ရှိသည်။
Slackware ကို Mate နဲ့ကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တယ်။ ပထမတော့သူကသင့်ကို console ထားပေးပြီး Mate ကိုအရင်ပြုစုခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးအရမ်းကောင်းပြီးမြန်တယ်။
"Slackware သည်တည်ငြိမ်သောစနစ်ကိုလိုချင်သော Arch အသုံးပြုသူများအတွက်အနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်သည်"
ဟုတ်ပါသည်၊ Slackware သည်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်အားလုံးစုစည်းထားသည်၊ ကောင်းစွာကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အချိန်သိပ်ဖြုန်းတာနဲ့တူတယ်၊
ဤမျှလောက်မများပါ ... အချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်အမှန်ပင်၊ သို့သော်ရလဒ်များကိုတွေ့မြင်ရသည်။ ငါ Gentoo ကိုခဏလောက်သုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါအချိန်အများကြီးအကုန်ခံခဲ့တယ် (LibreOffice?) ဒါပေမဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ကအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ အလံတွေနဲ့မင်းရဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့သင့်ရဲ့ hardware ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ်။
Slackware တွင် MATE ထည့်သွင်းခြင်းသည် Debian ကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမယုံလျှင်, MATE site ကို၎င်း၏ downloads အပိုင်း၌သွားပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်“ ပရောပရည်လုပ်ခြင်း” (အခြားလိင်မှုဆက်ဆံမှုကိုအခြားလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့်ဆက်ဆံခြင်း) သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ထင်ရပါသည်။ ကောင်းစွာကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ အချိန်တော်တော်များများဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်တူသည် (ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းမှနှစ်သက်သည်) ။
- ငါသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစ၍ Slackware ကိုသုံးသည် (SCO နှင့် BSD မသုံးမီ)
- ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာအမြဲတမ်း "ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စုစည်းရန်သင်လိုအပ်သမျှအားလုံး" ပါ ၀ င်သည်။
- ကျွန်ုပ်သည် Operating Systems ၏တည်ငြိမ်မှုကိုနှစ်သက်သည်
- ငါဒီဖြန့်ဖြူးဖို့ (နှင့်ပက်ထရစ် Volkerding) မှအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကြွေးကဲ့သို့ခံစားရတယ်
- ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုသဘောကျသည် (BSD အမျိုးအစား Boot အမျိုးအစားသည် Arch ကိုသုံးသည်သာမက Systen V ထက် ပို၍ ရှင်းလင်းသည်)
- ကျွန်ုပ်သည် "လွယ်ကူမြန်ဆန်သော" (အနောက်တိုင်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့၏ဘဝကိုရေလွှမ်းမိုးသောအတွေးအခေါ် - "လွယ်လွယ်ကူကူလိုချင်တယ်၊ မနေ့ကလိုချင်တယ်") ... အမျိုးသမီးများနှင့်မတူလျှင်ပင် 🙂
- "မွေးဖွား" ခဲ့သောဖြန့်ဝေမှုများအားလုံးနီးပါးကိုကျွန်ုပ်အမှန်ပင်စစ်ဆေးသည်မှာမှန်သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်အမြဲတမ်း Slackware OS နှင့် BSD OS တပ်ဆင်ထားပြီးသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းစနစ်များဖြစ်သည်။ (စကားမစပ်၊ အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားသောနှစ်ခုအပေါ်အခြေခံထားသော Salix OS နှင့် / သို့မဟုတ် Slackel ကဲ့သို့သောအခြားလျှော့အခြေပြုဖြန့်ဖြူးမှုများသည် terminal ကိုအသုံးပြုရန်ကြောက်ရွံ့သူများအတွက်ကောင်းသောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပေးနေသည်) ။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်အထိကြိုးစားခဲ့သမျှအပေါ့ပါးဆုံးဖြစ်သည့်အပြင် slackpkg နှင့်မှီခိုမှုများကို install လုပ်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပြင် Arch ကလိုငါ ballsy မရကြဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Arch LTS ထုတ်ဝေမှုကိုရှာမတွေ့တဲ့အတွက် Slackware ကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တယ်။
Arch တည်ငြိမ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်တစ်နှစ်ကျော်ကြာနှင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲရှိသည်
ကျွန်ုပ်၏ desktop pc နှင့် netbook..no ပြproblemနာနှစ်ခုလုံးအတွက်တူညီသောအချိန်ပမာဏသည်ထိုထက်နည်းပါသည်။ ၁၀၀% ပျော်ရွှင်ပါသည်။ 😀
Javier Eduardo Sola ဟုသူကပြောသည်
ငါ ၂၀၀၁/၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် Slack နှင့်ဗားရှင်း ၇ ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Galeria Jardin (Buenos Aires မှလူများအတွက်) Linux Essential စာအုပ်နှင့်အတူပါရှိသည့်ပျော့ပျောင်းသောသေတ္တာကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါတွေ့ခဲ့သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံး linux လမ်းညွှန်တွေထဲကတစ်ခုပါ။
ငါသိသော distro နှင့်အတူ, ကအလုပ်လုပ်ရဖို့ငါ့ကို3တပ်ဆင်ယူခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာသူတစ် ဦး ကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်အခန်းကဏ္ of ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ အခြား installers များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ပို "လက်ဖြင့်" လုပ်ရမည်။ သို့သော်၎င်းထက် ပို၍ သင်ယူခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ မှီခိုရန်ကိရိယာများရှိသော်လည်းအမှန်တရားမှာသူတို့နှင့်ပြproblemsနာရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ ဆာဗာတစ်ခုအနေနှင့်တည်ရှိသည်မှာအခိုင်မာဆုံးဖြစ်သည်။ ငါယူအက်စ်အတွက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိကွောငျးကိုဖတ်ကြပြီထင်ပါတယ်။ ဆာဗာအတွက် slack ကိုသုံးသောလူများ၏အရေးကြီးသော။ slack3ဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲအဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နေသောအရူးများအကြောင်းပြောရန်မလိုအပ်ပါ။ (ခက်ခဲသောပြောင်းလဲမှုကြောင့်အချိန်ကာလအားဖြင့် kernel ကိုပြန်လည်စုစည်းရန်လိုအပ်သည်) ။
ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အသုံးပြုသူများသို့ ပိုမို၍ အလုပ်လုပ်သောဖြန့်ဖြူးမှုများကိုစမ်းသပ်ရန်လှည့်သောကြောင့်၎င်းကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ပြီးပါကသင်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုသည့်ပရိုဂရမ်များစွာကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည် (ftp ကိုလိုချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည် client ၁၀ ခု၊ ၅ ftpservers များကိုတပ်ဆင်သည်) ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်တစ်သက်တာ၏ကိရိယာတစ်ခုစီရှိသည်။ ဆိုလိုတာကတော့ငါ console အတွက်အများကြီးသုံးခဲ့တဲ့ distro တစ်ခုအတွက်၊ 10 Gb disk ကိုစားသုံးခြင်းဟာငါနဲ့တော်တော်လေးသလိုပဲ။
slack အပေါ်အခြေခံပြီးအခြားရွေးချယ်စရာ packages များရွေးချယ်ထားခြင်းကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေး, ကအရသာအတွက်တတ်၏။
Slack သည်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အပေါ့ဆုံး KDE များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ (slack 154 သို့ ၀ င်သောအခါ ၁၅၄ MB ခန့်သုံးစွဲမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ခေတ်နောက်ကျသော hardware ရှိသော်လည်းမည်မျှအရည်ပျော်နေသည်ကိုဖော်ပြရန်) မရှိပါ။ ထိုအချိန်၌ distro ၏တီထွင်သူ Pat Volkerding သည်ဖျားနာပြီးလွှတ်ပေးမှုများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တန့်ခဲ့သည် (သို့သော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update ကိုအမြဲတမ်းရှိခဲ့သည်) ။ လောလောဆယ်နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်သုံးနှစ်တကြိမ်ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာသော်လည်း၎င်းတို့သည်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်သည်။ သူတို့ကအမြဲတမ်းကောင်းစွာစမ်းသပ်ပြီး kernel ကိုအတူ version ထွက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယနှင့်အတူထွက်လာ၏။
မြန်ဆန်သည့်ဆာဗာတစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ တူညီသော slack installer သည် Apache ကို Mysql နှင့် php နှင့်အတူသို့မဟုတ်နာရီဝက်ခန့်အကွာမှထွက်ခွာသွားသော mail server ကိုခွင့်ပြုသည်။
Javier Eduardo Sola ကိုပြန်ပြောပါ
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သူတို့သည် Slackware ကိုအသုံးပြုသည်ဟုအကြံပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ZPanel ကို Slackware နှင့်ထည့်သွင်းနိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်ပါ။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ်တွင်အလွန်မရေရာဟုဝန်ခံသော်လည်းဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းသင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးများတွင်ကျွန်ုပ်သည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောသင်ခန်းစာကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်အပြည့်အဝပျော်မွေ့ရန်အရာများစွာကိုကျွန်ုပ်လေ့လာပါမည်။
MATE site ပေါ်တွင်သင့်ကို desktop ကို compack မလုပ်ပဲ Slackware တွင်ထည့်သွင်းရန် repos ပေးသည်။
ငါ Arch ကြိုးစားချင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါကြောက်တယ် hahaha ငါက virtual Archero မှာစမ်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
Slackware ကို Arch ကိုယ်တိုင်ထက် install လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါ
တပ်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်အလတ်စားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားအရာများတပ်ဆင်ခြင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကဒ်ပြားများနှင့်အခြားပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နေ့ရက်တစ်ရက်အချိန်ရရန်ကျွန်ုပ်အားမရှင်းလင်းပါ။ ကျွန်တော်ကြိုးစာမည်
ပြproblemနာမရှိပါဘူး၊ အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်၊ slackpkg အတူတူတောင်အဲဒီပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ။
ငါတည်ငြိမ်သော Arch ရှာနေတာကြာပြီ, ငါကပြောသည်။ ထိုကောင်းစွာကြောင်း Slackware ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ငါမှတ်ချက်တွေကိုအများကြီးဂရုစိုက်လေ့ရှိပြီးအဆုံးမှာတော့အတွေ့အကြုံကပြောရုံနဲ့မတူဘူးဆိုတာသင်သဘောပေါက်လာတယ်။
တကယ်တော့ Slackware သည်တိကျသော packets များထည့်ခြင်းအတွက်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သည်။ Linux From Scratch ၏ပထမဆုံးဝမ်းကွဲဖြစ်သော Gentoo တွင်ကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုမပြုစုရန် Alien package converter ကိုပိုမိုအသုံးချနိုင်ခြင်းအပြင်၎င်းသည်အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Slackware ကို virtual machine မှာ install လုပ်ထားသလား၊ ငါမှားလား။ ၎င်းကို disk ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ရန်နှင့်သင်၏ hardware တွင်သင်တွေ့ရမည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemsနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်သည်။ virtualizing သည် graphics သို့မဟုတ် sound cards နှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်မတူကြောင်းသင်တွေ့မြင်သည် စစ်တွေအများကြီးပေးပါ။ အမြဲတမ်းအလွန်ကောင်းသောနိဒါန်းဆောင်းပါး။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် virtual machine တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း installation လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Intel ဖြစ်ပါကအခမဲ့ဒရိုင်ဘာများကိုအသုံးပြုပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် ATI / AMD သို့မဟုတ် NVIDIA ဖြစ်ပါကစီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများကိုအသုံးပြုပါ။
Slack သည်ရိုသေလေးစားမှုကိုပျက်ပြားစေသည်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ ၄ င်းကိုမွမ်းမံရန်ဖြစ်သည်၊ သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရန်၊ changelogs များကိုသေချာစွာဖတ်ရန်လိုသောကြောင့်ပရိုဂရမ်များအကြားပconflictsိပက္ခများကဲ့သို့သော application များစွာသည်ရပ်တန့်သွားနိုင်သည်။
သူ့ဟာသူမှာ MRS ပါ။ ၎င်းသည် package များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ wizard ပေါ်တွင်တင်ခြင်း၊ အသစ်စက်စက်အသုံးပြုသူများအတွက် (ယခုအင်္ဂလိပ်စကားပြောသော) အတွက်အလွန်လွယ်ကူစေရန်နှင့် GNU / Linux စကြာ ၀ inာတွင်သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးသက်တမ်းအရှည်ဆုံးဖြစ်ရန်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်သည်။ ။
သူသည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းသူနှင့် Arch နှင့် Debian တို့ပေါင်းစပ်ခြင်းထက် ပို၍ အခိုင်အမာပြောဆိုတတ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကသုံးနေပါတယ်။
ငါ့လက်ပ်တော့ပ်ထဲထည့်ပြီး ၂ လအတွင်း Slackware နဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်က LiLo ကြောင့် boot လုပ်တာပဲ။ ဒီအချိန်ကိုတိုးတက်စေရန် Grub2 နှင့်အစားထိုးရန်၎င်းကို configure လုပ်ရန်နည်းလမ်းရှိပုံရပါသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြန့်ဖြူးမှု၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်တွင်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းအလွန်ကောင်းသော😀
ကောင်းပြီ၊ lilo.conf နှင့် voila ကိုတည်းဖြတ်ပါ (အကယ်၍ သင်ကအခြား system တစ်ခုသို့မဟုတ် kernel အတွက်ရွေးချယ်ရန်သင့်အားအချိန်ပေးသည်ဆိုလျှင်)
root @ darkstar: ~ # mcedit /etc/lilo.conf (သို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်သောတည်းဖြတ်သူနှင့်)
ပြီးရင် "lilo" ကို run လိုက်ပါ။
root @ darkstar: ~ # lilo
လေးစားပါတယ် ကောင်းပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည် Slackware ကို (၉) နှစ်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အစဉ်အမြဲစိတ်အစဉ်ဆုံးခံစားခဲ့ရသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်ပိုမိုလှည့်ကွက်များစွာကိုရှာတွေ့ပါသည်။ update လုပ်, လက်ရှိငါ kernel ကို9နှင့် kde 3.9.10 နှင့်အတူဖြစ်၏, အချို့ update ကိုထွက်သငျသညျရှိနှင့်ပြီးသားအချို့ program ကိုပျက်ကွက်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါကအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်, ကယ့်ကိုငါ့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှည်ပါ Pat !!
ဟုတ်တယ်၊ အခုဒီ distro ကို virtual PC ပေါ်မှာသုံးပေမဲ့ငါကတခြား P4 မှာ Slackware ကို install လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်၊ အခု XP နဲ့ Debian Squeeze ရှိတယ်။
ငါ Debian မှာ installation dvd မှာစာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ တ ဦး တည်း googling ဖို့အသုံးပြုတယ်ကြောင်းဖြစ်ပျက် ...
တစ်စုံတစ် ဦး ကပြောသောမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သည်မှာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပါ။
အဲဒါကိုမှားယွင်းစွာမယူပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘလော့ဂ်ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုဖတ်ရှုသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်ကိုဖျော်ဖြေသောကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း X, Y, Z, distro ၏နောက်ထပ်လမ်းညွှန်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အလွန်အထောက်အကူပြုပါသလား။ နှင့်တူညီသောအရာတူညီသောဟုပြောသည် umpteenth အချိန်များအတွက်မှတ်ချက်များအတွက်, ဒီတစ်ခုသက်သေပြနေတယ်, အခြားတစ်ခုကပိုအနမ်းပါပဲ။
ပို။ ပင်ပို။ ပင်ဤအ distros အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ installation ကိုလက်စွဲစာအုပ်ရှိသည် ...
ဟုတ်တယ်လို့ထင်တယ်၊ တစ်ခုခုကအထောက်အကူပြုတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီစွမ်းအင်အားလုံးကိုပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်သို့ပို့ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
ငါအရမ်း troll အသံမမျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ။
Slackware သည်စပိန်စကားပြော Linux သုံးစွဲသူများထံမှအာရုံစိုက်မှုသိပ်မရသည့်အပြင်သင့်အားကြိုးစားရန်တားဆီးရန်ဒဏ္myာရီများကိုလည်းဖန်တီးထားသည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားလွန်းရသနည်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကထိုဒဏ္roာရီနှင့် ၀ တ္ထုများကိုကြားဖြတ်သောထိုဒဏ္sာရီများနှင့်ဒဏ္endsာရီများကိုငြင်းပယ်ရန်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သက်ရှိထင်ရှားစင်ကြယ်သော Linux ဖြန့်ဝေမှုများ = SLACKWARE ။
Slackware ကိုကျွန်ုပ်၏ desktop + Win8 + openSUSE tumbleweed တွင်အတော်အတန်ကြာအောင် run နေပါတယ်။ Slackware သည် linux ကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ်မှုမှာမယုံနိုင်စရာကောင်းပြီး၊ သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များနှင့်စနစ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိပဲ package များကိုရနိုင်သည်။ အထုပ်? သင့်မှာပေးနိုင်တဲ့ linux catalog အားလုံးရှိသည်။
မတည်ငြိမ်သောမတည်ငြိမ်သော repositories မရှိလျှင်ဤနေရာတွင် package များကို "hand" ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်
ဟုတ်ပါသည်၊ Slackware တွင်စပိန်ဘာသာဖြင့်အသိုင်းအဝိုင်းငယ်တစ်ခုရှိသော်လည်းအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ဘာသာပြန်များကိုသင်ယူရန်ကိရိယာများရှိပြီးဖြစ်သည်။
Slackware ကို Linux ရှိ titans များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်)
Gentoo / Funtoo, အရမ်းကောင်းသော distro, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေက USEs ပါ။ Slackware မှာအဲဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေမရှိဘူး။
Debian ။ နေ့တိုင်းသူ့ဟာသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ပြုသည်။
Centos / RH: Mmm နှစ်မျိုးလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
Slackware ကိုမင်းသိပ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တောင် Freebsd: D. ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
Slack သည်ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့် distro ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် virtual machine hahaha တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်၊ သို့သော် Gentoo သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အကျွံဖြစ်သောကြောင့်စူးစမ်းလိုစိတ်ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောအရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟေးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငါကြိုးစားတာကိုကျေနပ်တယ်၊ ပြီးတော့လက်ရှိ Arch နဲ့ကျွန်တော်ပျော်တယ်
စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ distro နှင့် ပတ်သက်၍ မရှိသောဒဏ္sာရီများစွာရှိသည်ဟုထင်ပါသည်။ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်သည်လက်ဆောင်စီဒီနှင့်အတူမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ထွက်လာသည့်အခါ (၁၉၉၉ ခုနှစ်) version 7.0 မှစပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုပါသည်။ ငါတို့ဟာဘယ်တော့မှနည်းလမ်းတွေကိုမခွဲခဲ့ကြဘူး။ ငါဟာတော်တဲ့ distros တွေအများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Slackware လိုတစ်ယောက်မှမရှိခဲ့ဘူး။ Linux user တိုင်းအတွက်တကယ် install လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်၊ packets တွေကို compiling မသုံးပဲ txz packages များမှ install လုပ်တယ်။ တစ်ခုတည်းသောအရာကကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကောင်းသည်ဟုထင်လျှင်၎င်းသည် package များ၏မှီခိုမှုကိုမဖြေရှင်းသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မည်သည့် package ကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်တန်တယ်ထင်တယ်
.txz packages များသည် compiling မပါဘဲရောက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ၊
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများ။ ငါ Debian စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သင်၏ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပြောခဲ့သည့်အရာနှင့်အတူနေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်သင်၏စာမူနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသော်လည်းအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်အစိတ်အပိုင်းအတော်များများတွင်ကျွန်ုပ်သည် gnu ၌မရှိဟုသင်ပထမ ဦး ဆုံးပြောကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် / linux သည် ၄ ​​လကျော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤဖိုရမ်နှင့်အခြားသူများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တည်ငြိမ်သော debian စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးအချို့သည်အခြားတစ်ယောက်မှအံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်မှာတည်ငြိမ်မှုမရှိသောကြောင့်ဆာဗာများအတွက်နှင့် winbug မှလာပြီးပုံမှန်နှင့်တည်ငြိမ်သောအရာအားလုံးကိုလိုချင်သောသုံးစွဲသူများကျွန်ုပ်၌ကြီးမားသောပြproblemsနာများရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်မှာအချို့အရာများကိုမသိသောကြောင့်မှီခိုမှုများသည်ကြီးမားသောပြproblemနာမဟုတ်ပါ၊ အသုံးပြုသူ ၄ ထက်မပိုသောသူများကိုသတိပြုမိသည်။ လအနည်းငယ်ကသူတို့ကိုပြောပြသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးပေါ်အရာအားလုံးကိုလိုချင်သည်။ kde နှင့် application အချို့အတွက်အသုံးချခြင်းများနောက်မှတည်ငြိမ်သော debian ဖြင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၌ vlc aptitude -t experimental install package4 နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရှိနိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ) အခြားအပလီကေးရှင်းအချို့တွင်မှီခိုမှုပြproblemsနာများရှိသည် ro ယခုတွင်ကျွန်ုပ်အနေနှင့်အရာအားလုံးကိုကောင်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တွင် debian sid နှင့်မှီခိုမှုပြproblemနာရှိသော်လည်းလာမည့် update ကိုဖြေရှင်းပြီးပြီဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည် debian sid ကိုတစ်လနီးပါးအသုံးပြုနေပြီး၎င်းသည်ငါ debian test နှင့်မထင်သောပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ sid သည်ပြisနာဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်မှားယွင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရှိပြီးတည်ငြိမ်သောစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်ကျွန်ုပ်သည်အသစ် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်မှားနိုင်သည်သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်နှင့်နောက်ဆုံးတွင် Debian လုပ်နိုင်သည် အခြားသူများကဲ့သို့တပ်ဆင်ခြင်းရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်။ Arch ကဲ့သို့သော Distros များသည်သင်ကျွမ်းကျင်သော text mode ကိုသာထားရမည်။ ငါမြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းနောက်ဆုံးထောင့်တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် system သည်လွယ်ကူသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသော၊ တည်ငြိမ်နိုင်သည်။ ကျောက်တုံးကဲ့သို့အဆုံး၌အခြားလှိမ့်ထုတ်လွှတ်ပေးသည့် distros များကဲ့သို့သုံးစွဲသူနှင့်စကားပြောသူများကိုမူတည်သည်။ ၎င်းသည်စမ်းကြည့်ပါ၊ အန္တရာယ်အနည်းငယ်ကိုရှာ။ ထင်မြင်ချက်ပေးရန်မထင်မီသင့်ထင်မြင်ချက်ကိုပေးပါ
တည်ငြိမ်သောမှစမ်းသပ်ခြင်းသို့ပြောင်းခြင်းသို့ပြောင်းလဲရန်စင်ကြယ်သောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုမှပြောင်းလဲခြင်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အားအကြံပြုခြင်းနှင့်မှီခိုမှုများနှင့်မပတ်သက်သော apt-get ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပုံမှန် updates များကို aptitude အနေဖြင့်မည်သည့်အရာများရှိသည်ကိုကြည့်ရှုရန် testig မှသွားခြင်းကိုရှောင်ရန်၊ အသေးအဖွဲဖြစ်ကြောင်းမှီခိုသင်စမ်းသပ်ခြင်းမှ sid မှသို့မဟုတ် sid မှ sid ကိုသွားသည့်အခါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြေရှင်းနေကြသည်လျှင်ကြည့်ပါ
မင်္ဂလာပါ (ယခင်ပို့စ်ပျောက်သွားသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏စာကိုသင်မဖျက်ပစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမဖျက်ပါ။ ၎င်းသည်ဘလော့ဂ်တွင်တစ်ခါမျှမှတ်ချက်မပေးခဲ့လျှင်အသုံးပြုသူ၏မှတ်ချက်များကိုစနစ်တကျပေးပို့သည်။ ဒီနှင့်သင်၏ယခင်မှတ်ချက်နှစ်ခုစလုံးသည် "ဆိုင်းငံ့ထား" ။ အခုငါအရင်ကဖျက်လိုက်တာကတူညီတယ်၊ နှစ်ခုထပ်တူစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ 😛
ယခုအချိန်တွင် debian sid သည်ဗားရှင်းအသစ်များမတင်သွင်းသေးသောကြောင့်တည်ငြိမ်သည် (ယခုအချိန်တွင် sid နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်) http://packages.debian.org/search?keywords=gnome-shell&searchon=names&suite=all&section=all။ sid ကိုငါသုံးသောအခါအပြောင်းအလဲကြီးသည် gnome2->3နှင့် graphical boot သည်တိုက်ရိုက်ကျသွားပြီး gnome အဟောင်းမှကျန်နေသေးသည့် packet များအများကြီးကျန်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် upload လုပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ခဲ့ရရသည်ကိုသတိရသင့်သည်။ ဗားရှင်းအသစ်အနေဖြင့်သူတို့သည် gnome 2.32 - 3.2 - 3.6 ကိုအလယ်အလတ်မသုံးဘဲခုန်ချနေကြသည်။ နှစ်နှစ်အကြာကျောက်တုံးကဲ့သို့ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သောအစအ ဦး ၌တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
သိချင်စိတ်က Slack နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအရာတစ်ခုခုကိုသုတေသနပြုရန်ကျွန်ုပ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါဖော်ပြချက်တန်ဖိုးထားသည်, သင်ဘလော့ဂ်၏မရှိခြင်းနှင့်ဤအကြီးအ distro အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏မရှိခြင်းဆင်ခြေပါလိမ့်မယ် ...
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် XFCE နှင့်ဖုံးလွှမ်းထားသော Slackware ကိုနှစ်သက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လှပပြီးကြည့်ကောင်းနေပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်သည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အနည်းဆုံးမရှိဘဲအစိုင်အခဲရှိနေသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအပလီကေးရှင်းအားလုံးရှိသည်။ ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ ...
ဒီ distro ကိုကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ငါလိုပဲငါလိုပဲသူတို့ချစ်ကြမှာသေချာတယ်။
Salck ကကျွန်တော့်အာရုံကိုအမြဲတမ်းဖမ်းစားထားတယ်၊ ဒီ distro ရဲ့စာပေတွေကိုငါအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။
Salckware ကိုကျွန်တော် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ Linux ကိုစတင်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံး၊ သန့်ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသော Distro သည်ကျွန်ုပ်တည်ရှိသည်။ Distro နှင့်ကျွန်ုပ် install လုပ်သောကျွန်ုပ်၏ဆာဗာများ။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့၌ပြaနာမရှိခဲ့ပါ။ ။
Oscar Meza အားစာပြန်ပါ
Muy Buenos ¡!
ငါ KDE နဲ့အိမ်မှာသုံးတယ်၊ စာကြည့်တာ၊ အီးမေးလ်ပို့တာ၊ စာရွက်သေးသေးလေးတွေရေးတာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ ကူးယူတာတွေ၊
အလုပ်မှာကျွန်တော်စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုမှီခိုနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၀၀% အသုံးပြုဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူး၊
အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ င်ရောက်မှု ^^ ဒီနေ့ပဲငါ fedora (: C) ကိုချိုးလိုက်ပြီး slackware ကိုစမ်းချင်သည် (အမှန်တရားကိုငါကြောက်တယ်) ။
ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ များများစားစားမပြောဆိုထားသည်ကိုသင်မှန်ပါသည်။ တကယ်တော့၊ ပို့စ်အများစု၊ tuto၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟောင်းနွမ်းနေပြီ။ : /
slackpkg ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုရန်အတွက်လမ်းညွှန်အချို့ကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ^^ ငါ slapt-get မတိုင်မီအသုံးပြုရန်ကြိုးစားချင်ပါသည်
ArchLinux တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Choqok မူကွဲကိုအသုံးပြုပုံ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ARPSpoofing မှကာကွယ်ပါ